छोटकरीमा आज - २०७७ भाद्र २३, मंगलबार
आज कोरोना भाइरसको पछिल्लो वस्तुस्थिति, उपत्यकाका मेयरको आग्रह : नाकामा सेना परिचालन गर, निषेधाज्ञा खुकुलो बनाऊ, भुक्तानी अवधिभर घर र गाडी कर्जामा ब्याजदर परिवर्तन गर्न नपाइने, लकडाउनमा १५ अर्ब बराबरको दूध नोक्सान, रेल विभागको टेन्डर अन्ततः रद्द, अमेरिकामा कोरोनाविरुद्धको खोपमा राजनीति भएको आरोप लगायका विषयवस्तुहरूलाई समावेश गरिएका छन्।
मंगलबार ९०२ जना थपिएसँगै नेपालमा कोरोना संक्रमितको कुल संख्या ४८,१३८ पुगेको छ भने मृत्यु हुनेको संख्या ३०६ पुगेको छ।
हालसम्म नेपालमा ३२,९६४ जना कोरोना संक्रमित निको भएका छन्।
=> New PCR Test : १०,६११ => New Recovered : २,२८७
हालसम्म क्वारेन्टाइनमा रहनेको संख्या ५ हजार ३१० जना रहेका छन्। त्यसैगरी सकृय संक्रमितको संख्या १४ हजार ८६८ जना रहेको छ। २४ घन्टामा ६ जनाको मृत्यु भएको छ।
पछिल्लो २४ घन्टामा काठमाडौं उपत्यकामा थप ३९६ कोरोना संक्रमित देखिएका छन्। स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले काठमाडौँमा ३००, भक्तपुरमा ५८ र ललितपुरमा ३८ जना संक्रमित देखिएको मंगलबार जानकारी दिएको हो।
राष्ट्रिय जनस्वास्थ्य प्रयोगशाला, टेकुमा गरिएको परीक्षणमा नेपाली कांग्रेसका महामन्त्री डा. शशांक कोइरालालाई कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको छ। सोमबार ज्वरो आएपछि कोरोनाको आशंकामा महामन्त्री डा. कोइरालाको स्वाब धुम्बराहीस्थित ह्याम्स अस्पतालमा र परिवारसहित सुरक्षाकर्मीलगायत १९ जनाको स्वाब स्टार अस्पतालमा परीक्षणका लागि दिइएको थियो।
अहिलेसम्म वैदेशिक रोजगारमा गएर कोरोनाका कारण समस्यामा परेका ५८ हजारभन्दा धेरै नेपालीहरु स्वदेश फर्किएका बताइएको छ।
कोभिड-१९ महामारीका कारण आन्तरिक उडानमा रहेका निजी क्षेत्रका वायुसेवा कम्पनीले रु १६ अर्बभन्दा बढी आर्थिक नोक्सानी व्यहोर्नु परेको छ। कोभिड–१९ महामारी नियन्त्रणका लागि सरकारले लागु गरेको बन्दाबन्दी र जारी निषेधाज्ञाको अवधिमा आन्तरिक तथा अन्तर्राष्ट्रिय उडान ठप्प हुँदा ती कम्पनीले ठूलो आर्थिक नोक्सानी बेहोरेका हुन्।
२४ घन्टामा थप ९०२ जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि, २ हजार २८७ जना डिस्चार्ज
बजारमा उपलब्ध स्यानिटाइजर किन्दा ध्यान दिनै पर्ने तीन कुरा - BBC News नेपाली
उपत्यकामा २४ घन्टामा थप ३९६ कोरोना संक्रमित
कोरोना भाइरस नियन्त्रण सम्बन्धी माग एवं निर्णयहरू :
काठमाडौं उपत्यका नगरपालिका फोरमले नाकाहरुमा कडाई गरेर उपत्यकाभित्र निषेधाज्ञा खुकुलो बनाउँदै लैजानुपर्ने निष्कर्ष निकालेको छ। नागरिकलाई जनस्वास्थ्यका मापदण्डबारे सचेत र जिम्मेवार बनाउँदै जाने, उद्योग, व्यवसाय र कलकारखाना सञ्चालन गर्दा स्वास्थ्य सुरक्षा मापदण्ड पालना गराउने, सवारी साधन जोर बिजोर गराउने, सार्वजनिक सवारी हाललाई सञ्चालनमा नल्याउने लगायत निर्णय भएका छन्। विषयगत आधारमा शिक्षकहरूको अनुपात वर्तमान स्थितिको आधारमा कायम गर्नुपर्ने ठहर गर्दै शिक्षकहरूको तलब भत्ता तत्काल उपलब्ध गराउनसमेत फोरमले माग गरेको छ।
छाया सरकारका रक्षामन्त्री भीमसेनदास प्रधानले प्रधानमन्त्री, मन्त्री र सांसदको तलब कटौती गरेर गरिब तथा विपन्‍न वर्गलाई खानाको व्यवस्था गर्न सरकारसँग माग गरेका छन्। काठमाडौं क्षेत्र नम्बर ६ बाट प्रतिनिधिसभामा निर्वाचित सांसद प्रधानले मंगलबार काठमाडौंबाट निर्वाचित सांसदहरुको तर्फबाट उपप्रधान एवम् रक्षामन्त्री ईश्वर पोखरेललाई ज्ञापनपत्र बुझाउँदै प्रधानमन्त्री, मन्त्री र सांसदको तलब कटौती गरेर गरिब तथा विपन्न वर्गलाई खानाको व्यवस्था गर्न माग गरेका हुन्।
साउदी अरेबियाको रियादस्थित सेमास्को कम्पनीको आवास गृह परिसरमा आइतबार नेपाली श्रमिकले नेपाल सरकारको विरोधमा नाराबाजी गरेका छन्। उनीहरुले विदेशबाटै प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई ‘देश छोड्’ भन्दै गालीसमेत गरेका छन्।
कम्पनीबाट काम गुमाएर नेपाल फर्किन विमान कुरिरहेका ती श्रमिक स्वदेश फर्किन नपाएपछि आफ्नै सरकारविरुद्ध आक्रोशित बनेका हुन्। उनीहरुले त्यहाँ नेपालका सडकमा हुने शैलीमै प्रदर्शन गरे।
तीन वर्षदेखि रोकिएको जग्गा कित्ताकाट खुला गरेपछि भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रीले आफ्नो मन्त्रालयले "पहिले गरेको निर्णय त्रुटिपूर्ण" रहेको बताएकी छन्।
सरकारले २०७४ साल साउन २६ गते कित्ताकाटमा रोक लगाएको थियो। तर पछि २०७५ साल पुस २९ गते एउटा परिपत्र गरेर मन्त्रालयले स्थानीय तहले बनाएको निर्देशक समितिले जग्गालाई खेतीयोग्य र अन्य भनी वर्गीकरण गर्न अनुमति दिएको थियो।
उत्तरी चीनको सीमासँग जोडिएको हिल्सा नाकामा पहिचान झल्किने सीमा प्रवेश गेट निर्माण भएको छ। कर्णाली प्रदेश पर्यटन मन्त्रालयको आर्थिक सहयोग र डिभिजन वन कार्यालय हुम्लाको प्राविधिक सहयोगमा सीमा प्रवेश ढोका निर्माण भएको हो।
मदिरा, वियर वा सूर्तिजन्य पदार्थ उत्पादन गर्ने उद्योगले पैठारीकर्ता तथा बिक्रेतालाई उपहार दिन नपाउने भएका छन्। अन्तःशुल्क ऐन २०५८ मा गरिएको संशोधनपछि यस्तो व्यवस्था लागू कार्यन्वयनमा आएको आन्तरिक राजस्व विभागले जनाएको छ।
नयाँ व्यवस्था अनुसार उत्पादकले आफ्ना पैठारीकर्ता र बिक्रेताका लागि छुट दिएर कम मूल्यमा त्यस्ता पदार्थ पनि विक्री गर्न पाउने छैनन्। साबिकको भ्याटमा दर्ता पैठारीकर्ता र विक्रेताका लागि मात्रै दिन पाइने सुविधा संशोधनले परिमार्जन गरेको हो।
ल विभागले विवादित टेन्डर अन्ततः रद्द गरेको छ। प्रभावित जनतालाई मुआब्जा नदिई रेलमार्गको ठेक्का दिने र साइट क्लियर नभएको भन्दै आयोजना अलपत्र पार्ने योजना रोकिएको छ।
नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले कोरोना भाइरस (कोभिड–१९) को बेला पनि अर्थतन्त्रका सूचकहरु सकारात्मक नै देखिएको बताएका छन्।
उनले निर्यातको स्थिरता रहनुका साथै आयातमा भएको व्यवस्थापनसाथै चालू खाता घाटामा उल्लेख्य सुधार भएको बताए । शोधनान्तर स्थिति २ खर्ब ८२ अर्बले बचतमा रहेको र विदेशी विनिमय सञ्चिति१४ खर्बभन्दा माथि रहनुले आर्थिक क्रियाकलाप विस्तारमा सहयोग पुग्न सक्ने अवस्था रहेको उनले बताए।
दुई अस्ट्रेलियन सञ्‍चारमाध्यमहरुले चीनमा रहेका आफ्ना संवाददाताहरुलाई फिर्ता बोलाएका छन्।
अस्ट्रेलियन ब्रोडकास्टिङ कर्पोरेसनका बिल बिर्टलेस र अस्ट्रेलियन फाइनान्सियल रिभ्युका माइक स्मिथ मंगलबार सिड्नी फर्किएका हुन्।
सोमबार डब्लूएचओको मुख्यालय जेनेभामा भएको भर्चुअल मिडिया ब्रिफिङका क्रममा महानिर्देशक डाक्टर टेड्रोसले अब विश्वका सबै देशले जनस्वास्थ्य क्षेत्रमा लगानी गर्नुपर्ने बताएका हुन्।
महानिर्देशक डाक्टर टेड्रोसले जनस्वास्थ्य सामाजिक, आर्थिक र राजनीतिक स्थायित्वको आधार स्तम्भ भएको बताए।
उनले कोरोना नै अन्तिम महामारी नहुने उल्लेख गर्दै भविष्यका लागि विश्व तयार रहनुपर्ने पनि बताए । '
संयुक्त राष्ट्र अमेरिकाको निर्वाचन नजिकिएसँगै राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प र उनका प्रतिस्पर्धी डेमोक्रेटिक उमेदवार जो बाइडेन एक-अर्काप्रति आक्रामक रुपमा प्रस्तुत भइरहेका छन्। कोरोना भाइरसविरुद्धको खोप विकास र वितरणका विषयमा पनि ट्रम्प र बाइडेनले एक-अर्कालाई आरोप लगाउनुका साथै आलोचनासमेत गरेका छन्।
राष्ट्रपति ट्रम्पले कोरोनाविरुद्धको खोप नोभेम्बरअघि नै आउने संकेत गरेका छन्। उनले नोभेम्बरको निर्वाचनअघि नै कोरोनाविरुद्धको खोप उपलब्ध हुने बताउँदै डेमोक्रेटिक उमेदवार बाइडेनले 'खोपविरुद्ध लापरबाही रुपमा अभिव्यक्ति' दिइरहेको आरोप लगाएका छन्।